ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာများ: ပညာရှိသုံးယောက်နှင့် မိကျောင်းကြီး
ထရိတ်ဒါတွေဟာ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ရုံသာမက တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်များပါ ပြည့်ဝသည့်သူများဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ရဲ့ တီထွင်ဖန်းတီးကြံဆထားသည့် ထရိတ်ဒင်းနည်းစနစ်များ နည်းဗျူဟာများအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်.
Profitunity ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာကို အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ထရိတ်ဒါများဖြစ်တဲ့ ဘေ ၀ီလျှံ Bill Williams (Trading chaos စာအုပ်ကို ရေးသားသူပါ. သင်မှတ်မိမလားမသိဘူး) နဲ့ သူ၏ သမီး ဂျက်စတင်းတို့က ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်. ထိုဟာကို ပညာရှိသုံးယောက်နှင့် မိကျောင်းကြီးဆိုပြီး လူသိများကြပါတယ်. ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုခေါ်ပါလိမ့်လို့ သင်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်. ဒီလိုပါ.
မိကျောင်းဆိုတာ မှုဗင်း အဲဗရိတ် ပျမ်းမျှရွေ့လျှားနှုန်း ၃ ခုပေါင်းပါ:
နှုတ်ခမ်း- အချိန်အပိုင်းအခြား ၅ခု ရှိသော၊ ဘား ၃ခု အရှေ့ကိုရွှေ့ထားသော ချောမွေ့ MA;
သွား (အနီရောင်လိုင်း) - အချိန်အပိုင်းအခြား ၈ခု ရှိသော၊ ဘား ၅ခု အရှေ့ကိုရွှေ့ထားသော ချောမွေ့ MA;
မေးရိုး (အပြာလိုင်း)- အချိန်အပိုင်းအခြား ၁၃ခု ရှိသော၊ ဘား ၈ခု အရှေ့ကိုရွှေ့ထားသော ချောမွေ့ MA.
များသောအားဖြင့် ထရမ်းလိုင်းမရှိတဲ့အခါ ဒီလိုင်း၃ခုက ရောထွေးနေပါတယ်. ထိုအခြေအနေမှာ မိကျောင်းအိပ်နေပါတယ်. အဲ့နောက် သူနိုးလာပါတယ်. ဗိုက်ဆာလာပါပြီ (လိုင်း ၃ခု စတင်ပြီး ခွဲလာပြီး မိကျောင်းပါးစပ်ဟတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆင်ပါတယ်. မိကျောင်းဗိုက်ဆာလာတဲ့အခါ အကျ(သို့) အတက် ထရမ်းလိုင်းနဲ့ တွေ့နေရပြီလို့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်. ထရိတ်ဒါတွေက ဒီ 'ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်' ကိုစောင့်ပြီး ထရမ်းလိုင်းကြီးကြီးတွေကို ဖမ်းဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်. မိကျောင်းပါးစပ်ပိတ်သွားရင် ၀ယ်သူ (သို့) ရောင်းသူတွေက ခဏနား (သို့) lot အရွယ်အစားလျှေ့ာချဖို့ စဉ်းစားပါတယ်.
ကဲ ဆက်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ ပညာရှိသုံးယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ကြရအောင်.
ပထမဆုံး ပညာရှိက တက်ကျဖြစ်နေတဲ့ဈေးကွက်မှာ ထရမ်းလိုင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပေါ်မှုကို သိရှိဖို့ရာ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်. ခွဲဖြာသွားတဲ့ဘားကို သင်ရှာရပါမယ်. (morning သို့မဟုတ် evening star ပုံစံပါ).
မိကျောင်းလိုင်းရဲ့အောက်မှာ ဈေးရောက်နေရင် သင်အ၀ယ်ဖွင့်သင့်ပါတယ်. ခွဲဖြာဘားက အရင်ဘားရဲ့အောက်မှာ ရှိကိုရှိရပါမယ်. ပြီးရင် ဘားရဲ့အပေါ်တ၀က်ထဲမှာပဲ ပိတ်ကိုပိတ်ရပါမယ်. Buy stop ကို ဘားရဲ့ထိပ်မှာထားသင့်ပါတယ်. stop loss ကို ဘားရဲ့အောက်မှာထားပါ. ဆန့်ကျင်အချက်ပြခြင်းတွေပြရင် အမြတ်ယူပါ.
ဒုတိယ ပညာရှိ - အရမ်းလန်းတဲ့ oscillator (AO)
အရမ်းလန်းတဲ့ oscillator (AO) က အ၀င်ပွိုင့်တွေကိုသိရှိဖို့ရာ ထပ်ဆောင်းအကူအဘောမျိုးအနေနဲ့ အသုံးချပါတယ်. သူ့အရှေ့မှာ အတက်ခွဲဖြာဘားရှိပါတယ်. ဒါမှမဟုတ် အကျ fractal ဖရက်တယ်ရှိပါတယ်. AO က အစိမ်းဘား၃ခု ဆက်တိုက်ပြရင် သင်ဝယ်နိုင်ပါတယ်. Stop ကို အတက်ခွဲဖြာဘားရဲ့အခြေ (သို့) အကျ ဖရက်တယ်မှာထားသင့်ပါတယ်. နောက်တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုံး ဘား ၃-၅ ခုလောက် နိမ့်ဆင်းသွားပါမယ်. ဒါမှမဟုတ် အကျဆိုတာအချက်ပြပါမယ်.
တတိယ ပညာရှိ - ဖရက်တယ်များ fractal
ဖရက်တယ်တွေက အရင်အမြင့် (သို့) အနိမ့်မှာရှိတဲ့ ထိုတက် (သို့) ကျမှုကို သိဖို့ရာကူညီပေးပါတယ်. ၀ီလျှံ ပြောတာအရတော့ ဖရက်တယ်တစ်ခုချင်းစီက Elliot Wave အီလွိုက်လှိုင်းရဲ့ အဆုံးကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်. ပြီတော့ ဖရက်တယ်တစ်ခုစီရဲ့ ထိုးတက်ကျမှုဟာ တက်ကျမြန်လှိုင်းအသစ်ကို ပြောပါတယ်.
Profitunity အချက်ပြ - ပညာရှိသုံးယောက် အတူတကွတွေ့ဆုံသောအခါ
ပထမဆုံး မိကျောင်းလိုင်းရဲ့ အထက် (သို့) အောက်မှာ ပထမပညာရှိဖြစ်ပေါ်လားဆိုတာကြည့်ပါ. အဲ့နောက် အတက် (သို့) အကျပုံစံပေါ်အောင်စောင့်ပါ. ဈေးကွက်ထဲသင်ဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ ဒုတိယပညာရှိ AO ကိုကြည့်ပါ. (အစိမ်းလိုင်း (သို့) အနီလိုင်း ၃ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရပါမယ်). နောက်ပြီး တတိယပညာရှိကိုသွားပါမယ်. ဖရက်တယ်ဖြစ်အောင်စောင့်ပါ. ဘား၂ခုက အနိမ့်ဆုံး အနည်းများ minimums (သို့) အမြင့်ဆုံး အများ များ maximums နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်. ဖရက်တယ်ပေါ်တဲ့အခါ stop အော်ဒါကို မြင့်/နိမ့် အနောက်မှာထားပါ. ပြီးရင် stop-loss ကို အနိမ့်ဆုံးထဲက အနည်းဆုံးနေရာ (သို့) အမြင့်ဆုံးထဲက အများဆုံးနေရာမှာထားပါ.
ဆန့်ကျင်အချက်ပြမှုတွေပေါ်ရင် ဈေးကွက်ကနေထွက်လိုက်ပါ. ပြောင်းပြန်တက်ကျပုံစံဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ (သို့) AO ရဲ့ histogram ဂရပ်မှာ ဆင်တူဘား၃ခု ဆက်တိုက်ရှိတဲ့အခါမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်.